KITAABA SEENAA OROMOO PDF DOWNLOAD - Information Pdf.
by Sheridan Nikolaus - Dec 30, 2018
^^^v /Yuusuf 'adam Aliyyii Qunbii Bonayya llmaan Oromoo Jahan (6) . Seensa kitaaba kanaa keessatti seenaa isaa akka armaan gadiitti. Kitaabni Seenaa Oromoo bara keessaa ibsu tokko kana dura kan Kitaaba kana gara Afaan Oromootti kan hiikan biyya Canada. : Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16fa: 24x17cm, xxvi, pp. Text entirely in Oromo. A history of the Oromo people to the 16th Century.
Ilmi quxxusuun dabranii lafa kitaaba seenaa oromoo barbaadu. Ragaa kana lamaanirraa kan hubachuu dandeenyu, Oromoon godaanee daangaa Keeniya kaasee hamma daangaa Tigreetti qubachuu kan dandahee, yeroo dheeraa keessa akka tureedha.
Jaarraa 16ffaa keessa kitaaba seenaa oromoo Baahireen barreeyse baayyinni ummata Oromoo meeqa taha? Kanaaf Kitaaba seenaa oromoo jaarraa 16ffaa keessa godaanuu jalqabee utuu hintaane, jaarraa hedduun dura suuta suutaan, ilmi quxxisuun dabree qubachaa, lafa margaafi bishaan qabu barbaadaa godaane.
Duraani Oromoonni lammi tokko tahee osoo jiraatanii gosa Booranafi Bareentummati adda bahan. Ilmaan Bareenummaas akka walitti heddommaachaa deemaniin adda adda bahanii qubachuu jalqaban. Odaan Bultum kaarra Qurquraarraa gara kibbaatti hamma km 3 fagaatee argama.
Sirna Gadaan duratti akkaataa bultuma Oromoo akkam akka ture wanti beekamu hinjiru. Haa tahuu malee, himamsa afaaniitfi akkaataa dagaagina hawaasaarraa kan hubachuu dandeenyu nijira.
Akkaataan dagaagina hawaasaa dhala kitaaba seenaa oromoo kamiyyuu sirna keeessa dabru niqaba.
Haalli hawaasni Oromoo bara Gadaa duraafi booddee keessa ture calaqqiinsa akkaataa bulmaata isaa ka duraanii nuuf ibsuu ni dandaya. Kuniis akkaata qabeenya dhuufaa kitaaba seenaa oromoo calaqqisa. Ormoon waan tikfattee tureef qabeenya dhuunfaa loon yoo tahe malee, lafti qabeenya gamtaa ture.
Kanaa wajjiin kan ilaalamu haala walbulchiinsa isa jidduu tureedha.
Hamma Gadaan dhufee bakka qabtetti, manguddootaan kitaaba seenaa oromoo kun sadarkaa sadarkaan guddataa dhufuun hinhafne. Haalli kun akkamitti ture? Wanti kana calaqqisu boodana dabree maali? Hariiroon kun dura sadarkaa maatii keessatti gad dhaabbate.
Ilmi hangafni kabajamuu qaba. Warri quxxusuu isa hordofu. Waan inni jedhe dhagayu.
Hariiroon kun maati duwwaa keessatti hin hafu. Akkuma hawaasni sun dagaaguun hangafaafi quxxusuun ibidda, manaafi gosa keessattiis hojiirra oola. Ibiddi hangafaafi quxxusutti adda bahee walkabjuuniifi waliif abboomamuun buluun dhalate. Hariiroon ku yeroo dheeraaf hawaasa Oromoo keessatti hojjate.
Goso tokko keessa karra hagafaafi quxxusuu nijiraatu. Maanguddootni karra hangafaa keessa jiran kitaaba seenaa oromoo gosa bulchuurratti qceelfama kennu.
Karri quxxusuu tahan warra hanagafa kana jalatti gurmaawu. Sadarkaa gossaattiis hariiroon kun ittifufa. Gositi hangafni kitaaba seenaa oromoo warra kaan qaceechu, geggeessu warri quxxusuun isaan jalati walitti qabamu.
Gosootni kun akkasitt walitti dhufanii tokkooma gosaa tribal confederacies tolfatan. Kitaaba seenaa oromoo gosaa kun ammoo, walkeessatti hangafaafi quxxusuu qabu. Hamma Gadaan dagaagutti akkaataan bulmaata Oromoo sirna kanaan ture.
RUDRAM SANSKRIT CHANTS EPUB